CAYAARYAHAN CUMAR MAXAMED OO NOQDAY SOMALIGII UGU HOREEYAY OO SERIA A USA U SAXIIXA
Cayaaryahanka da'da yar ee CUMAR ABDULLAHI MAXAMED ayaa noqday laaciibka ugu horeeyay oo Somali ah ee u saxiixa kooxda heerka koowaad ee horyaalka wadanka Mareykanka oo loo yaqaan USL "UNITED SOCCER LEAGUE".
Cumar ayaa heshiis aad u dheer la saxiixday kooxda FC CINCINNATI oo ka dhisan gobolka OHIO oo ku yaala bartamaha wadakna Mareykanka.
Kooxaha ka ciyaara Horyaalkan USL ayaa tiradooda ay gaareysa 29 kooxood oo ka yimaaada Canada iyo Mareykanka, waxaana loo kala saraa GALBEED iyo BARI.
Cumar Abdullahi Mohamed oo 19 jir ah isla markaana ka cayaara dhanka bidix ee Qadka dhexe "MIDFIELDER" ayaa mar dhow lagu arki doonaa garoomada wadanka USA iyo CANADA ee AMERICAN MAJOR FOOTBALL LEAGUE.
Kooxda uu u cayaaro ee FC CINCINATI waxaa la aas'aasay 2015 waxaa lagu wadaa in uu noqdo kan ugu adag ee qeyb libaax leh ka qaadan doona cayaaraha xiisaha badan ee NORTH AMERIKA.
CUMAR oo haysta dhalasho mareykan ah ayaa aad ugu han wayn in uu u cayaaro isla markaana gacan siiyo qaranka Somaliya,isagoo ku balan qaaday in xulka Somaliya keliya uu funaanadooda gashan doono mustaqbalka.
Cumar oo hore ugu soo cayaaray Jackson College wuxuu noqday cayaaryahankii ugu da'da yaraa ee u saxiixa kooxda CINACINATI,isagoo lagu wado in uu noqon doono cayaaryahanada ugu firfircoon kooxda FC CINCINATI.
Abdullahi Mohamed iyo Casho Sh. Abukaro oo ah Aabaha iyo hooyada Cumar ayaa aad ugu mahdcelinaya dhanaan dadkii ka qeyg qaatary horumarka ciyaaraha ee wiilkooda Cumar.
Waxaan leenahay HAMBALYO CUMAR iyo qoyskiisa,waxaana hubaal ah in magaca iyo sharafta Somaliya uu kor ugu qaadi doono.